PTUZ Yokurudzira Nhengo Dzayo Kuti Dzidzokere Kumabasa
Gumiguru 10, 2007
Sangano reZimbabwe Progressive Teachers' Union of Zimbabwe, PTUZ, riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzidzokere kumabasa.
Sangano iri rinoti ratora danho iri mushure mekunzwa kubva kumadzisahwira aro uye kunhengo dzaro, idzo rakasangana nadzo neChipiri.
Hutungamiri hwesangano iri hwasangana muHarare nevavanodyidzana navo, pamusangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko rakatarisana nevadzidzisi pamwe nevana vechikoro, zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi.
Zvimwe zvakurukurwa nezvazvo pamusangano uyu, inyaya yekukoshesa dambudziko revana vechikoro sezvo vari kurasikirwa nezvidzidzo zvavo, uye vamwe vavo vari kunyora bvunzo dzekupera kwegore vasina varairidzi vanovabatsira.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa yekuti vamwe vabereki vangangotadza kuvimba nevarairidzi vari kuramwa mabasa, sezvo hupenyu hwemangwana hwevana vechikoro huri kuvhiringwa nemakakatanwa aripo pakati pevarairidzi nehurumende.
Hutungamiri hwesangano iri hwanzi huchasangana zvakare nenhengo dzahwo kuti huzeye zvakurukurwa mumusangano uyu, uye kunzwa pfungwa dzevarairidzi.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti kurudziro yavo yekuti varairidzi vadzokere kumabasa haifanirwe kuonekwa sekunge vakundikana mune zvavari kuda.